I-Amazon Turkey Integration - I-Propars E-export nge-Amazon, Ebay, Allegro kanye ne-Etsy
Ukuphathwa kwe-oda nokubuyisa
Ukuhlanganiswa kwe-ERP / Accounting
Izindawo Zezimakethe zaseYurophu
Izimakethe Zomhlaba Wonke
Izindawo Zezimakethe zaseTurkey
Ngena ngemvume Qalisa manje!
UBize Ulaşın: 0 850 532 44 61
Kulula kakhulu ukuphatha isitolo sakho se-Amazon.com.tr ngePropars!
Zonke izitoko zilandelwa ngokuzenzakalela. Izinguquko zamanani nezesitoko ziboniswa khona manjalo
Ama-oda avela ku-Amazon.com.tr aqoqwa kusikrini esifanayo nawo wonke amanye ama-oda.
Isiza Sakho se-E-Commerce
Uhlelo lwakho lwe-ERP
Imikhiqizo / Ama-oda Izimakethe
Kulula kakhulu ukuthengisa ku-Amazon.com.tr ngePropars!
Ungalayisha imikhiqizo yakho ku-Propars ngobuningi nge-Excel noma i-XML.
Ungathengisa imikhiqizo oyengeza ku-Propars ku-N11 ngokuchofoza okukodwa.
Ama-oda avela ku-Amazon.com.tr aqoqwa ndawonye nawo wonke amanye ama-oda esikrinini esifanayo.
Yenza izibuyekezo ngobuningi emikhiqizweni.
Dala i-invoyisi yamahhala yama-oda wakho ngokuchofoza okukodwa
Phatha i-e-commerce kusikrini esisodwa nge-Propars Marketplaces Integration
Ukufakwa komkhiqizo okulula: Ungangeza imikhiqizo oyengeza ku-Propar ezitolo zakho kuzo zonke izimakethe ngesikhathi esisodwa futhi uyivule ukuze ithengiswe.
Ukuguqulwa kwemali okuzenzakalelayo: Ungathengisa imikhiqizo yakho ethengiswa ngemali yangaphandle ezimakethe zaseTurkey e-TL, futhi ungathengisa imikhiqizo yakho nge-TL ngamanani okushintshaniswa ahlukene emazweni ahlukene.
Ukuvuselelwa Kwamasheya Okusheshayo Nentengo: Ungahlola ngokushesha izitolo zakho kanye nezitolo ezibonakalayo kumasayithi amakhulu kakhulu e-e-commerce emhlabeni i-Amazon, eBay kanye ne-Etsy. Ngamanye amazwi, lapho uthengisa umkhiqizo ku-Propars esitolo sakho somzimba futhi uphelelwa isitoko, umkhiqizo uvalwa ngokuzenzakalelayo ukuze udayiswe esitolo esise-Amazon France ngesikhathi esifanayo.
Izimakethe eziningi: Izimakethe eTurkey kanye nezimakethe ezihamba phambili emhlabeni, i-Propar, zihlale zengezwa ezimakethe ezikhona nasemazweni amasha.
Okwamanje: Izinto ezintsha ezenziwe ezimakethe zilandelwa yi-Propar futhi zengezwe ku-Propar.
Inani Eliningi: Ngokudala amaqembu amanani, ungathengisa kunoma iyiphi indawo yemakethe ngentengo oyifunayo.
Ukuphathwa kwesici: Ungaphatha kalula izici zomkhiqizo ezidingekayo ezimakethe nge-Propar.
Izinketho zomkhiqizo: Ungadlulisela izinketho zomkhiqizo ezinjengombala nosayizi kuzo zonke izimakethe ngokuchaza izithombe ezihlukene nezintengo ezihlukile.
Propars Imibuzo ebuzwa njalo
I-Propars wuhlelo olusiza ukuhweba olungasetshenziswa noma yiliphi ibhizinisi elihweba. Isindisa amabhizinisi ekusebenziseni izinhlelo ezihlukile ngezidingo zawo ezihlukile, futhi isindisa amabhizinisi isikhathi nemali. Ngenxa yezici zayo eziningi njengokulawulwa kwesitoko, ukuphathwa kwangaphambi kokubalwa kwezimali, ukuhleleka nokuphathwa kwamakhasimende, amabhizinisi angahlangabezana nazo zonke izidingo zawo ngaphansi kophahla olulodwa.
Yiziphi izici i-Propars enazo?
I-Propars ine-Inventory Management, Management Purchasing Management, Accounting Management, E-commerce Management, Order Management, Customer Communication Management izici. Lawa mamojula, ngalinye lawo liphelele, aklanywa ngokuhambisana nezidingo zama-SME.
Kusho ukuthini ukuphathwa kwe-E-Commerce?
Ukuphathwa kwe-E-commerce; Kusho ukuthi ufinyelela izigidi zamakhasimende eTurkey nasemhlabeni wonke ngokuletha imikhiqizo oyithengisa ebhizinisini lakho kwi-inthanethi. Uma une-Propars nawe, unganqikazi, ukuphathwa kwe-e-commerce kulula kakhulu ngePropars! I-Propars yenza izinqubo eziningi ezidingekayo futhi ikusize ufinyelele impumelelo ku-e-commerce.
Kukuziphi iziteshi ze-e-commerce lapho imikhiqizo yami izothengiswa khona ngePropars?
Ezimakethe ezinkulu kakhulu zedijithali lapho abathengisi abaningi abanjengo-N11, Gittigidiyor, Trendyol, Hepsiburada, Ebay, Amazon kanye ne-Etsy bathengisa khona imikhiqizo yabo, abakwaPropars bafaka imikhiqizo yabo lapho ithengiswa ngokuchofoza okukodwa.
Ngizoyidlulisela kanjani imikhiqizo yami kwaPropars?
Ukuze imikhiqizo yakho iqhubeke ukuthengiswa ezimakethe eziningi ze-intanethi, kwanele ukuyidlulisela kwaPropars kanye kuphela. Ngalokhu, amabhizinisi amancane anenani elincane lemikhiqizo angangena kalula kwimikhiqizo yawo esebenzisa imodyuli ye-Inventory Management yePropars. Amabhizinisi anemikhiqizo eminingi angalayisha amafayela weXML aqukethe imininingwane yomkhiqizo kwaPropars futhi adlulisele izinkulungwane zemikhiqizo kwaPropars ngemizuzwana embalwa.
Ngiqala kanjani ukusebenzisa iPropars?
Ungacela isilingo samahhala ngokuchofoza inkinobho ethi 'Zama mahhala' ekhoneni eliphezulu kwesokudla ekhasini ngalinye bese ugcwalisa ifomu elivulayo. Lapho isicelo sakho sifinyelela kuwe, omele amaPropars uzokushayela ngokushesha bese uqala ukusebenzisa iPropars mahhala.
Ngithengile iphakethe, ngingakushintsha kamuva?
Yebo, ungashintsha phakathi kwamaphakeji nganoma yisiphi isikhathi. Ukuze uhambisane nezidingo eziguqukayo zebhizinisi lakho, vele ushayele iPropars!
Thengisa Emhlabeni Wonke Thola Okungaphezulu!
Nge-Propar, qala ukuthengisa ngokuchofoza okukodwa ezimakethe zomhlaba ezifana ne-Amazon, Ebay ne-Etsy!
Phatha ama-oda kusuka kusikrini esisodwa
Qoqa wonke ama-oda akho esikrinini esisodwa, i-invoyisi ngokuchofoza okukodwa! Ingakhipha ama-invoyisi ngenqwaba yama-oda avela ezindaweni zemakethe kanye nesayithi lakho le-e-commerce; Ungaphrinta ifomu lempahla eyinqwaba.
Ngokulayisha imikhiqizo yakho kwaPropars kanye kuphela, ungayithengisa kuwo wonke amasayithi ngokuchofoza okukodwa.
Akudingeki ukhathazeke ngokuthumela ngokwehlukana komkhiqizo ngamunye. Izinkulungwane zemikhiqizo zizothengiswa ngemizuzwana embalwa ezitolo ozikhethayo.
Ake sikusize unqume.
Sicela ushayele ummeleli wethu wamakhasimende ngamaphakeji ethu.
Propars ukuphela kwesixazululo se-E-EXPORT saseTurkey. Ungumlingani womhlinzeki wesevisi we-Amazon, i-Ebay, i-Etsy ne-Payooner. Isekelwa yiKOSGEB neTürk Telekom.
© 2020 Propars. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Ukuhlanganiswa Kwembulunga yonke
Indawo yakho ye-e-Commerce